60 Sanadood Kaddib, Miyaan Dabaaldegnaa mise Waan Tiiraanyoonnaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, October 24, 2019
Afrikaan.so — July 19, 2020
Dabaaldegyada maalinta xorriyadda ayaa badanaa waxa ay kiciyaan dareenno
Isbuucan waxaa loo dabbaaldegayaa lixdan sanno guurada ka soo wareegatay markii Jamhuuriyadda Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay! Waxaa suuragal ah inaad la yaabto markii aad ogaato in Jamhuuriyada Soomaaliya ay xorriyadda ka hor qaadatay inta badan dalalka deriska la ah. Dalalka urur goboleedka IGAD, sida Kenya, Uganda, Jabuuti, Eritrea iyo South Sudan dhammaantood waxa ay xorriyadda qaateen Soomaaliya kaddib.
Ciidammada AMISOM ayaa ka yimid dalal ay Soomaaliya xornimada ka hor qaadatay sida Uganda iyo Kenya
Dhanka ammaanka, weerrarada Al-Shabaab iyo Ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah ayaa weli dhaca. Walow ay socdaan dedaallo lagu doonayo in dib loogu habeeyo milateriga qaranka iyo booliska, ayaa haddana weli ciidammada Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxa ay ilaaliyaan dowladda.
Waxa ugu daranse waxa ay tahay in 60 sanadood kaddib markii uu dalkan xoroobay, ay ciidammada AMISOM ee sugaya ammaanka Soomaaliya maanta ay ka yimaadeen dalal xorriyad qaadashada kaga dambeeyay Soomaaliya, oo ay ku jiraan Kenya iyo Uganda iyo Jabuuti oo Soomaaliya ay si adag ugu dagaallantay sidii ay xorriyadeeda ku heli laheyd.
Dabaaldegyada maalinta xorriyadda ayaa badanaa waxa ay kiciyaan dareenno isdaarran oo ka imanaya jiilasha kala gadisan ee Soomaalida. Dadkii u soo joogay waqtigii gumaysiga waxa ay maanta oo kale ku tilmaamaan maalin qadarin iyo ixtiraam mudan, iyagoo soo goconaya ficilladii dulaysiga iyo habdhaqankii xumaa.
Maadaama ay fahansanyihiin waxa ay ka dhigan tahay in dalkaaga aadan xor ku ahayn, taasna waa mid loo qaatayn ah. Hasayeeshee waxaa jira aragtiyo kale oo soo baxay kaddib markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay. Tusaale ahaan waxaa jira rayi’ ay qabaan dadkii usoo joogay maalmihii wacnaa ee midnimadii, quwaddii, iyo xorriyaddii dalka Soomaaliya.
Qiyaasaha qaar ay tilmaamaan 70% ayaa dhashay xilligii uu burburayay qarankii Soomaaliya. Soomaaliyada kaliya ee ay da’yartaas yaqaannaanna waa midda guuldarraysatay, dagaalka, argagixisanimada, iyo burcad-badeedda ku caanbaxday.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, dalku waxa uu noqday mid dib u socod ah, waana ay yartahay wax muujinaya horumar la sameeyay tan iyo xorriyaddii. Dadka qaarkood, waxa ay u tahay xusuus xanuun badan markii ay arkaan horumarka gaabiska ah ee la gaaray tan iyo waqtigii gobonimada la helay. Si kooban, waxay inala tahay habka ugu wanaagsan ee maalmaha xorriyadda loogu dabaaldegi karo ay tahay in si dhab ah aynu uga fekerno waxa aynu gaarnay iyo waxa inaga lumay lixdankaas sanadood ee la soo dhaafay.
Lixdan sanadood kaddib, maanta waxaynu rajaynaynaa inaynu waqti iyo tamarba gelin doonno dood qaran oo dhab ah oo ku saabsan taariikhda qaranka. Waxaynu rajaynaynaynaa in todobaadka xorriyadda ee Soomaaliya ay ka dhalan doonaan doodo culus oo ay yeeshaan aqaanyahannada Soomaalida, ardayda, waxgaradka, iyo siyaasiyiinta oo si dhab ah looga wadahadlo wixii khaldamay iyo sidii aannu mustaqbalka hore ugu socon lahayn. Waxaa jira casharro ay tahay in laga barto taariikhda, mana sii wadi karno khiyaaliga ah in aynu xor ahayn muddo lixdan sanadood ah, waxkastana ay inoo hagaagsanaayeen.
Waxaa wadajir u qoray: Cabdi Maxamuud Xirsi iyo Afyare Cabdi Cilmi
Dr. Cabdi M. Xirsi waa cilmi-baare ka tirsan Griffith Center for Social & Cultural Research, Griffith University, Australia.
Dr. Afyare Cabdi Cilmi waa bare culuunta ammaanka ka dhiga Barnaanijka Daraasaadka Khaliijka ee Jaamacadda Qatar, Doxa.
Tags: 60 Sanadood KaddibMiyaan Dabaaldegnaa mise Waan Tiiraanyoonnaa?
Next post Lixdan Guurada Lixdankii: Ma shantaa laba ah, mise labadaa shanba ah?
Previous post Maxay Haweenka Tunisiya Maalin Gaar ah Afka u Marsadaan Xammuurad cas?